Dowladda Somaliya oo deg deg u soo daabaceysa lacag cusub | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Dowladda Somaliya oo deg deg u soo daabaceysa lacag cusub
Dowladda Somaliya oo deg deg u soo daabaceysa lacag cusub
Ra’islawasaare ku xigeenka XUkuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhaqsi ah u soo daabaceyso lacag cusub oo uu dalku yeesho si wax loogaqabto lacag la’aanta ka jirta dalka.
Waxaa uu Ra’islawasaare ku xigeen Mahdi sheegay in Dowladda iyo Ganacsatada ay kulan qaateen la iskuna fahmay in aan canshuuraha la kordhin laakiin dakhliga la kordhiyo.
Siyaabaha dakhliga lagu kordhinayo ayuu sheegay in ay ka mid tahay wax ka qabashada kalluumeysiga sharci darrada ah,isaga oo soo qaatay in diiwaan gelinta Ganacsatada ay qeyb ka tahay dakhli kordhinta.
Waxaa kale oo uu intaas ku daray in ilaha dhaqaalaha ee dowladda wax soo saarkooda la xoojinayo si loo kordhinayo canshuuraha dakhligana u kordho.
Mahdi Maxamed Guuleed waxaa uu lacagta cusub sheegay in ay noqon doonto shilin Soomaali fudud oo qudaarta,Caanaha iyo wixii la mid ah lagu iibsan karo lagana gudbayo lacagta doollarka ah ee hadda ay dadka u badanyihiin adeegsigeeda.
Lacagta kunka shilin ee hadda taalla ee duugga ah ayuu sheegay in la xareynayo kaddibna ay dowladda dhexe lacagta cusub gelineyso suuqa .
Wasaaradda Malaiyadda,Guddiga maaliyadda iyo Bangiga dhexe ayuu sheegay in ay ku howllanyihiin ka shaqeyna lacagta cusub oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay dowladda ugu dadaaleyso in ay soo daabacdo.